Ubunewunewu obu-1 bokubuyela kwigumbi lokulala, entliziyweni yendalo.
Ixesha lokubaleka yonke imihla, phumla kwilanga elifudumeleyo, kunye nencwadi oyithandayo, okanye uphume uye kunxweme lwasekhaya, ukuba ubhukishelwe ngaphambili ukuba ufuna unyango lobuso okanye lomzimba. Oku kurhoxa ngokupheleleyo kumalunga nokuphumla, ukuseta ngokutsha, ukuhlaziya kwaye ukonwabele indawo engqonge ihlathi elizolileyo.
Ngepaki yesizwe yaseDorigo kuphela i-25mins kude, iilwandle ezintle ezingakhange zichukunyiswe kwi-5min drive, indawo yethu yokuhlala ikwindawo entle ethe kratya ekupheleni kwesitrato, yindawo ezolileyo yokubuyela emva kokuphonononga indawo entle yasemaphandleni.
IValla yidolophu encinci ebekwe emantla eNambucca, kufuneka siye kwiikhefi ezinkulu eValla, nakwikhemesti, kwaye ukuba ugcina amehlo akho exolile kukho iibhokisi ezinkulu zokunyaniseka ezizaliswe yimveliso yasekhaya. Icafe eyondlayo kunye negrocer ivulekele isidlo sangokuhlwa ngefrikhwethi kwaye uhlale ubusuku, kwaye kukwakho nethaveni yendawo.
Njengoko sikwipropathi siyayihlonipha into yokuba lixesha lakho, sikhona ukuba unayo nayiphi na imibuzo kodwa ngenye indlela siyazigcina kuthi kwaye njengoko ukurhoxa kwakho kubucala siyayihlonipha loo nto kwaye siyakuvumela ukuba ube njalo. Siyathemba ukuba uya kuyonwabela ipropathi yethu njengathi
Njengoko sikwipropathi siyayihlonipha into yokuba lixesha lakho, sikhona ukuba unayo nayiphi na imibuzo kodwa ngenye indlela siyazigcina kuthi kwaye njengoko ukurhoxa kwakho kubuca…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-8589